Madaxa Shirkadda Samsung oo la xiray - Worldnews.com
Madaxa Shirkadda Samsung oo la xiray
Lee Jae-yong oo ah madaxa shirkadda Samsung ayaa lagu xiray dalka Kuuriyada Koonfureed isaga oo loo haysto laaluush iyo eedaymo kale.
Arrintan ayaa lala xiriiriyay fadeexaddii horseeday in xilka laga xayuubiyo Park Geung-hye.
Samsung ayaa lagu eedeeyay in ay deeq siisay mu'sasado aan faa'iido doon ahayn oo ay
Shirkadda Samsung oo baaritaan ku samaysay sababta uu la kululaanayay ama la gubanayay taleefoonkeeda Galaxy Note 7 ayaa ogaatay in mushkiladdaasi ay ka imanaysay cilad...
Koonfurta Kuuriya oo dooneysa in ay xirto madaxweynihii hore Park Geun-hye
Dacwad oogayaasha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay doonayaan in la jaro warqad lagu soo xiro madaxweynihii hore Park Geun-hye. Waxay ku eedeynayaan in ay door ku...
Maamulka Australia ayaa ka digay halista ka dhalan karta in gudaha diyaaradaha lagu isticmaalo qalabka baytariyada ku shaqeeya, ka dib markii uu dab qabsaday haweenay...
Madaxii shirkadda Samsung oo is casilay
Agaasimaha fulinta ee shirkadda tiknoolajiyada laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed ee Samsung, ayaa iscasilay. Kwon Oh-Hyun ayaa sheegay in la gaaray xiligii shirkadda...
Kuuriyada Koonfureed: Maxkamadda oo aqbashay xil ka xayuubintii lagu soo oogay madaxweynaha
Maxkamadda sare ee Koonfur Kuuriya ayaa ku go'aamisay in madaxweyne Park Geun-hye si kama dambays ah xilka looga qaado. Madaxweynaha waxa dacwad xil ka xayuubin ah ku soo...
Madaxweynihii xilka laga xayuubiyey ee Koonfur Kuuriya, Park Geun-hye ayaa dacwad oogayaashu su'aalo ka waydiinayaan fadeexaddii musuqmaasuq ee ay xilka ku wayday. Ka dib...
Koonfur Kuuriya: Madaxweynihii xilka laga xayuubiyey oo su\_'aalo la waydiinayo
Madaxweynihii xilka laga xayuubiyey ee Koonfur Kuuriya, Park Geun-hye ayaa dacwad oogayaashu su'aalo ka waydiinayaan fadeexaddii musuqmaasuq ee ay xilka ku wayday. Ka dib markii ay gaadhay xafiiska dacwad oogayaasha ayay u sheegtay warfidiyeenka in ay "wixii dhacay ka xuntahay". Park way diiday in arrintan su'aalo laga waydiiyo intii ay haysay xilka madaxtinimada, laakiin...
K. Kuuriya: Maxkamad Xukmisay Xilka Xayuubinta Madaxweynaha
Maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Koonfur Kuuriya ayaa oggolaatay in xilka laga xayuubiyo haweenayda madaxweynaha ka ahayd dalkaasi Park Geun-hye. Park ayaa waxaa lagu helay musuq maasuq iyo awood ku takrifalid, waxaana baarlamaanka dallkaasi uu...
K/Waqooyi oo wadahadalka ay K/Koonfureed ku baaqday ku tilmaantay mid aan "daacad laga ahayn"
Kuuriyada Waqooyi ayaa arrin aan "daacad laga ahayn" ku tilmaantay wadahadallada ay ku baaqday Kuuriyada Koonfureed, ka dib markii saraakiishooda sarsare ay yeesheen kulan naadir ah. Masuuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa BBC-da u sheegay in wasiirkooda arrimaha dibadda Kang Kyung-wha ay wadahadal la yeelatay dhiggeeda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho. Kulankaas shir-doceedka ah...
Shirkadda sameyso kombuyuutarada game-ka ee Razer ayaa shaaca ka qaaday fikrad ay ku soo saareyso laptop leh seddax shaashad. Waxay arrintaasi ku daahfurtay xarunteeda teknolojiyadda ee magaalada Las Vegas, ee dalka Mareykanka. Shirkadda waxay ku sheegeysaa in kombuyuutarkeeda uu yahay noocii ugu horeeyay ee caalamka ee seddax shaashad leh. Cilad gashay taleefankii u dambeeyay...
Kuuriyada Koonfureed oo madaxweyne dooranaysa
Codbixiyayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinnimada dalkaasi, taasoo xilligeeda laga soo hormariyay ka dib markii xukunka laga riday madaxweyne Park Geun-hye. Moon Jae-in oo u janjeera afkaarta bidixda ayaa ugu cadcad musharraxiinta tartamaya, waxana kusoo xigga Ahn Cheol-soo. Doorashadan ayaa si gaar...